Imephu yesiraphu ingaba isisulu esisha sokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiraphu ye-Maple ingaba isisulu esisha sokushintsha kwesimo sezulu
Isithombe - Viajejet.com
Uma uthanda isiraphu ye-maple, eyaziwa nangokuthi isiraphu ye-maple, futhi ukujabulela ukukubeka, ngokwesibonelo, kuma-pancake wesidlo sasekuseni… Ngikuphathele izindaba ezimbi. Hhayi mina, kepha ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-Ecology.
Futhi lokho, izihlahla lapho kukhishwa khona ubisi ukwenza ukuthi kungaboni ukuzalwa kwekhulu elisha ngenxa yokukhuphuka kwamazinga okushisa.
Amamephu izihlahla ezinqabayo ezidabuka ezifundeni ezipholile zomhlaba. Sithola ubuningi bezinhlobo e-Old Continent, kepha kukhona neziningi eMelika, njenge-Acer rubrum. ESpain sinakho I-Acer campestris, the Ama-Acer platanoides noma i I-Acer opalus, phakathi kwabanye. Zonke, kungakhathalekile ukuthi zikuphi, Yizitshalo ezithanda isimo sezulu esipholile, esinamakhaza aphansi (angadluli ku-30ºC) nobusika obunamakhaza (ngaphansi kuka-10 degrees ngaphansi kuka-zero).
Lapho izinga lokushisa lomhlaba liphuma, lithinta wonke amamephu ngokulingana, kufaka phakathi izinhlobo ezisetshenziselwa ukwenza isiraphu, ngoba zingafa (futhi empeleni, zivame ukwenza lokho ngokushesha) lapho izimo zingabi zizinhle; okungukuthi, lapho izinga lokushisa liphakeme kunalokho okufanele futhi liyeka ukuna kaningi ngangokunokwenzeka.
Lokhu yinto ababhali bezocwaningo abakwazile ukuyifakazela. Kuyo ungabona amamodeli amabili: kweyokuqala, ukwehluka kwesilinganiso sokushisa komhlaba jikelele kuyisilinganiso esisodwa kuphela ngaphezu kwaleso samanje futhi akukho kwehluka kwemvula; kowesibili, ukwehluka kunama-degree amahlanu ngokuncipha kwemvula okungama-40%. Imiphumela iyakhathaza kakhulu: esimweni sokuqala, ukukhula kuzokwehla kakhulu, kepha kwesesibili, ngqo, bekungeke kube nokukhula.
Yize okwamanje enjalo nje, amamodeli wezibalo, ayisibonelo esihle sokuthi imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu isisithinta kanjani ngaphezu kwalokho ebesingakucabanga ekuqaleni.
Imininingwane eminingi, lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Isiraphu ye-Maple ingaba isisulu esisha sokushintsha kwesimo sezulu
ICiudadanos iphakamisa ushintsho ku-PHN ukujwayela ukuguquka kwesimo sezulu
Ososayensi bafunda ngomthelela wokushintsha kwesimo sezulu kuDry Corridor